Fanoloana « permis biometrique » Misavorovoro indray ny saim-bahoaka
Razana saika nentina tany Faratsiho Nalevina teny Anjanahary tampoka…
Somary nanaitra ny nahita fandevenana razana nitranga ny maraimben’ny sabotsy teo tetsy amin’ny simetieran’Anjanahary.
Trafika tany Toliara "Camion frigorifique" no nitaterana hazo
Fomba avo lenta indray no nampiasain'ny mpitondra hazo tsy ara-dalàna. Fiara lehibe manokana, "camion frigorifique" no nitondrana hazo tsy ara-dalana niditra tao Toliara ny sabotsy 23 may teo tany Toliara.
Hazomanga ao Bekopaky Nitaraina ho norahonana depiote
Solombavambahoaka iray lany tany amin’ny Distrikan’Antsalova no voalaza fa nanao kabary masiaka tena miendrika fampihinanana maloto Raiamandreny Hazomanga sy ireo fokonolona mihitsy any amin’ny fokontanin’i Bekopaky, kaominin’Ambanivohitr’i Bekopaky, distrikan’Antsalova.
Hemerson Andrianetrazafy “Fanorenana no atao kanefa fanolanana no misy...”
Mitambatra daholo ato anatiko ny hatezerana sy haromotana ary tena tohana tanteraka aho amin’ny maha olon- tsotra ahy, hoy ny mpahay tantara sady mpahay vakoka,
Aryane Kely Avotra soa aman-tsara tao amin’ny HJRA
Vita soa amantsara tao amin’ny hopitaly HJRA ny fandidiana an'i Aryane kely manana aretina fahasembanana ao amin’ny lohany ao noho ny fanampiana nentin-dRtoa Mariana Maso sy ny Association Miahy (Sophia),
Paositra Malagasy sy IMRA Hiara-hiasa hanaparitaka ny CVO
Fifanaovan-tsonia fiaraha-miasa tamin’ny Paositra Malagasy amin’ny alalan’ny tolotra fitateran’entana malaky indrindra « Paositra Rapida » sy ny IMRA
Manomboka anio etsy amin’ny Gallery Alhambra Ankadimbahoaka ny fanoloana ireo « permis biometrique » tamin’ny endriny teo aloha.
Lasa adihevitra sy miteraka fikorontanan-tsaina indray, indrindra fa ny fisiana « lettre d'engagement » izay ambaran’ny minisiteran’ny atitany fa hoentina manambara, fa tena izy "Authentique" ary tsy misy hosoka ny « permis de conduire biometrique » izay hosoloina. Marihinay fa misy tokoa ny teo aloha hosoka ary koa azo tamin'ny alalan'ny antontan-taratasy hosoka (Faux bordereau) misy ny « modèle » azo alaina tahaka, hoy ny fanazavana. Midika io fa tena nisy ny tsirambina ary tsy manana firaketana (base des données) momba ireo efa vita teo aloha ny fanjakana. Tonga dia mivoaka eo vao ampidirina ny anaran’ilay hosoloina raha ny tokony ho izy. Lasa mikorontana indray ny saim-bahoaka. Ho an'ireo efa nadoa vola tao amin'ny Faritany Ambohidahy teo aloha nefa tsy nahazo ny "Permis Biometrique", dia mila manatona eny amin'ny « Centre Immatriculateur » ao amin'ny Porte 25 fa efa misy olona miandraikitra an'izany ao. Eo amin'ny herinandro eo ny fanamboarana satria mbola hisy ny « contrôle d'authenticité » an'ireo « Permis biometrique » hosoloina, hoy ny fanazavana. Raha mipetraka any ivelany ilay olona ka tokony hanolo ny Permis ilainy, dia tsy afaka maniraka olona izy fa tsy maintsy tonga ao amin'ny « Centre Immatriculateur » mba halaina sary sy mametraka peta-tondro ary manao sonia. Raha lany ny « validité » an' ilay « catégorie » nefa ny anjarany mbola amin'ny taona manaraka, dia tsy maintsy manavao ny "Visite Médicale" izy ary tsy maintsy manolo ny « Permis biometrique » indray amin'ny sarany 38 000Ar. Ny zokiolona mahatratra 60 taona miakatra izay lany "Visite Médicale" dia maimaimpoana ny fanoloana azy. Tsy maintsy manatona ny "Centre Immatriculateur " "Permis Carton Rose" ary mandoa ny sarany Permis biométrique vaovao. Hatreto aloha dia mbola azo soloina foana izy ireny, hoy ny minisitera.